Dzhampaolo Patstsini - आफ्नो मूल देशमा विभिन्न फुटबल क्लब खेल्न सक्ने एक इटालियन स्ट्राइकर छ। दुर्भाग्यवश, उहाँले एक वास्तविक तारा बन्न थिएन, यो एक शानदार खेलाडी छैन, तर अझै पनि त्यो detained थियो जहाँ सबै क्लब, मा, देखाए राम्रो खेल र राम्रो परिणाम। आफ्नो लक्ष्य लक्ष्य स्कोर थियो - र यो उहाँको आवश्यक थियो त्यो गरे। Dzhampaolo Patstsini के क्यारियर पथ थियो? कुनै पनि टोली लागि उहाँले प्ले र त्यहाँ के छ सम्झना गर्न व्यवस्थित?
Dzhampaolo Patstsini जन्म भएको थियो2अगस्ट, 1984, फुटबल एउटा प्रारम्भिक उमेर मा संलग्न गर्न थाले, तर क्लब को पूर्ण-fledged फुटबल एकेडेमी, "अटलान्टा" मात्र पन्ध्र को उमेर मा थियो। त्यहाँ उहाँले युवा टोली लागि प्ले तीन वर्ष को अवधिमा राम्रो परिणाम देखाए, त्यसैले उहाँले अठार वर्षको हुँदा उहाँले एक पेशेवर सम्झौता प्रस्ताव गरिएको थियो। आफ्नो पहिलो सिजन उहाँले मिलान अभ्यास रही गरिएन र एक डबल लागि समर्थन जारी, तर यति व्यवस्थापन टीम, जो निम्न वर्षमा, उमेर 19 मा, क्लब मा एक प्रमुख खेलाडी भएको छ प्रभावित। उहाँले तिनीहरूलाई मा दस लक्ष्य स्कोरिङ, चालीस खेल खेले, र अर्को सिजन पहिलो आधा मा सोह्र खेल मा छ लक्ष्य स्कोरिङ, अधिक झन्झन् थाले। Dzhampaolo Patstsini सफलताको unnoticed गएका छन्, र जो बीच "Fiorentina" थियो प्रमुख इटालियन क्लब, को प्रतिभाशाली युवा स्ट्राइकर देख्यौं। त्यो एक छ र खेलाडी लागि आधा लाख यूरो पोस्ट।
को "Fiorentina" मा Blossoming
जाडो 2005 Pazzini जवान स्ट्राइकर तुरुन्तै आधार भरोसा गर्न थाले जहाँ "violets", को छाउनीमा आफूलाई फेला परेन। निस्सन्देह, छैन त धेरै - सबैभन्दा अवस्थामा यो एक विकल्प छैन र 15 खेल मा तीन गोल। तर, अर्को सिजन प्राय क्षेत्र मा देख्न सकिन्छ, जस्तै Dzhampaolo Patstsini एक खेलाडी - फुटबल सुरु लामबद्ध देखा पर्न थाले र आफ्नो नयाँ क्लब लागि स्कोर। कुल उहाँले "Fiorentina" तीन पूर्ण मौसम र दुई पटक आधा एक वर्ष बिताएको - त्यहाँ अन्त मा आफ्नो समय को सुरुमा। यो समयमा उहाँले 134 मिलान प्ले र 33 गोल। 2009 24 वर्षीया को जाडो, मनमा पायो "बैंगनी" जो प्रस्ताव नौ लाख यूरो धेरै रूपमा, क्लब खुशी साथ सहमत "Sampdoria"। र Dzhampaolo Patstsini जसको फोटो धेरै इटालियन खेल मिडिया को सामने पृष्ठहरूमा थिए, क्लब को निवास परिवर्तन।
संक्रमण गर्न "Sampdoria"
"Sampdoria" मा Pazzini खर्च सिर्फ एक पूर्ण सिजन - उहाँले फेरि हिउँदमा स्थानान्तरण गरे, त्यसैले पूर्ण सिजन थप दुई आधा थपियो। यो समयमा उहाँले धेरै 87 को रूपमा मिलान खर्च र 48 गोल - ठूलो क्लब को ध्यान आकर्षित जो एक प्रभावशाली आंकडा। यो त Dzhampaolo Patstsini, जो अहिले बिल्कुल सबै प्रशंसक थाहा को एक इशारा मा जन्म भएको थियो। जब उहाँले स्कोर, उहाँले आफ्नो मुख दुई औंलाहरु संग, जो बीच भाषा धक्का दिन्छ।
को "अन्तर" मा खराब सुरुवात
इटालियन स्ट्राइकर को जाडो 2010 अर्को स्थानान्तरण गरिएको थियो - यो खेलाडीहरू 18 लाख यूरो को एक अविश्वसनीय राशि को लागि बाहिर राखिएको छ जो मिलान "अन्तर", द्वारा किनेको थियो यो समय। दुर्भाग्यवश, उहाँलाई नियुक्त आशा पूरा भएन स्ट्राइकर छ - "अन्तर" मा खर्च र आधा वर्ष, उहाँले खेल को एक सभ्य राशि, साठी धेरै रूपमा प्ले। तर यो केवल 19 गोल - को पाठ्यक्रम, यो राम्रो परिणाम छ, तर यो एक लाख यूरो बाहिर राखिएको प्रत्येक लक्ष्य पुस्तिका को लागि, क्लब स्पष्ट छैन खुसी छ कि बाहिर गरियो। र 2012 को गर्मी मा, Pazzini अन्य मिलान क्लब बेचिएको थियो।
को "मिलान" एक नयाँ शुरुवात
एक पटक "मिलान" मा, Pazzini धेरै briskly सुरु पहिलो सिजन मा 16 गोल स्कोरिङ। तर यो पौराणिक क्लब ज्वरो मिलाउ गर्न थाले, र अब युवा स्ट्राइकर घाइते लङ्गडो कि त थियो। त्यसैले, अर्को दुई मौसम मा उहाँले सम्झौता उहाँलाई विस्तार भएको छैन, जो पछि गरिएको 49 मिलान, मात्र आठ गोल, र उहाँले "भियना" मा निःशुल्क जारी थियो।
"भियना" मा क्यारियर जारी
जो नयाँ क्लब Pazzini 2015 देखि कार्य हो, केवल एक सिजन सम्म त्यहाँ आयोजित गरिन्छ कि 31 मिलान प्ले र छ गोल। अब उहाँले 32 वर्ष पुरानो छ भनेर उहाँले अब देख छ नयाँ चुनौतीहरू - Giampaolo पहिले नै अवकाश बारेमा सोच, तर अझै यसलाई 2020, आफ्नो करार "भियना" संग समाप्त हुन्छ वा यो अझै पनि छ कि छैन भनेर जब मा हुनेछ कि भन्न सक्दैन पर्दा अन्तर्गत अर्को क्लब प्रदर्शनमा जानुहोस्। वा प्रारम्भिक अन्त्य गर्न निर्णय - यो देखेको गर्न किनभने यसको उल्लेखनीय प्रदर्शन को रहनेछ।
को Azzurri Pazzini प्ले एक अग्रणी भूमिका - त्यहाँ सधैं अधिक शक्तिशाली र उन्नत hitters थिए। उहाँले मोन्टेनेग्रो राष्ट्रिय टोली विरुद्ध खेलमा 2009 मा आफ्नो debut गरे, र यसको debut उहाँले एक विकल्प रूपमा गोल गरेका थिए जो एक लक्ष्य, मा चित्रित गरिएको छ। फलस्वरूप, उनले 2010 विश्व कप गए, तर सम्पूर्ण 23 मिनेट, कुनै प्रभावकारी कार्य द्वारा प्रतिष्ठित प्ले। तर थप प्रमुख टूर्नामेंट Pazzini भाग थिएन मा - उनले 25 मिलान राष्ट्रिय टोली लागि, तिनीहरूलाई चार लक्ष्य स्कोरिङ र चार सहायता दिने प्ले। पछिल्लो खेल उहाँले माल्टा विरुद्ध खेलमा एक विकल्प रूपमा जारी थियो 2012 मा भएको थियो।
Andrei Razin: जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
नदी डेल्टा - एक विशेष वातावरण
पानी मेरुदण्ड कर्षण: प्रक्रिया, contraindications, प्रभावकारिता र समीक्षा विवरण
संख्या बारेमा कथा। हितोपदेश, वचनहरू, Tales मा संख्या